Himalaya Dainik » सबै मदनका “मुना” हुँदैनन् ….
३ मंसिर २०७५ |
सबै मदनका “मुना” हुँदैनन् ….
सबै मदनका ‘मुना’ हुँदैनन् । मदनकी ‘मुना’ हुनको लागि त्याग र समर्पण चाहिन्छ । मदनको जस्तो सादगीपन, जनताप्रतिको अगाध प्रेम र लगाव चाहिन्छ ।
चर्चित नेताको डेरामा जाँदा हामी चकित परेका थियौं । नक्सालको एउटा सामान्य पुरानो घर, एकतलामाथि दुई तिनवटा साँघुरा कोठामा उनी बस्थे । बेतका केही पुराना कुर्ची । एउटा चौध इन्चको ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट टिभी । न त त्यहाँ कुनै भडकिलो सोफा थियो, न डेढ दुइ लाख पर्ने पलङ । सामान्य काठको दराजमा माक्र्स, लेनिन र माओका पुस्तक देखिन्थे । मदन र उनकी जीवनसँगीनी विद्या भण्डारीको लवाई खवाई बडो सामान्य थियो ।
यो सबै जननेता मदनको लिगेसीबाटै उनलाई प्राप्त भएको हो । विद्या यदि मदनकी विधवा हुँदैनथिन भने आज उनी यो स्थानसम्म पुग्ने थिइनन् । किनकी, पार्टीमा लामो समयदेखि कार्यरत रहँदै आएका धेरै महिला नेतृहरु पाखा परेका छन् । स्वयं जीवराज आश्रितकी पत्नीको कुनै खोजखबर छैन । भूमिगत कालदेखि भिडेका त्यागी महिला नेतृको ठाउँमा टाठाबाठा, चल्तापुर्जा र सुन्दर नेतृ हावी भइरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति ३ मंसिर २०७५, सोमबार १२:२३